Ndodii Kana Mwana Wangu Achishungurudzwa? | Mazano Ekubatsira Mhuri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kamba Kannada Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Maya Mongolian Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba
Ndodii Kana Mwana Wangu Achishungurudzwa Nevamwe?
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndodii Kana Mwana Wangu Achishungurudzwa Nevamwe?
Mwana wenyu anokuudzai kuti ari kushungurudzwa nevamwe kuchikoro. Mungaita sei? Moudza vakuru vechikoro kuti vapaniche vanhu vari kushungurudza mwana wenyu here? Moudza mwana wenyu kuti adzorere here? Musati masarudza zvekuita, chimbofungai zvinotevera.
Zvii zvandinofanira kuziva nezvenyaya iyi?
Ndingabatsira sei mwana wangu?
Kana munhu achishungurudzwa anenge achiitwa sei? Anenge achirwadziswa panyama kana kuti mupfungwa. Munhu anenge achishungurudza wacho anenge achizviita nemaune. Kakawanda kacho izvi zvinenge zvichiitika kwenguva yakareba.
Zvimwe zvamunofanira kuziva: Vamwe vanoti kunyange ukaitirwa chinhu chidiki chero bedzi usingazvifariri, unenge watoshungurudzwa. Asi kana mukangoti chero chinhu chidiki chinenge chaitirwa mwana wenyu mobva matochiita nyaya hombe, zvichamutadzisa kukura ari munhu anogona kugadzirisa kusawirirana.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Usakurumidza kugumbuka.”—Muparidzi 7:9.
Pfungwa inokosha ndeiyi: Dzimwe nguva panewo pamwe pekuti unofanira kupindira, asi pamwe pacho kumbomusiya kunomubatsira kuti adzidze kugadzirisa zvinhu ega.—VaKorose 3:13.
Ko kana mwana wenyu akati ari kugara achiitirwa utsinye nevamwe?
Nyatsoteererai mwana wenyu. Edzai kuona kuti (1) chii chiri kuitika uye (2) kuti sei achishungurudzwa. Tangai maziva zviri kuitika musati masarudza zvekuita. Zvibvunzei kuti, ‘Pangava nezvimwe zvaasiri kutiudza here?’ Kuti munyatsoziva zviri kuitika munogona kutaura nemudzidzisi wake kana kuti nevabereki vemwana ari kushungurudza mwana wenyu.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Kana munhu achipindura nyaya asati ainzwa, ihwohwo upenzi kwaari uye kuzvinyadzisa.”—Zvirevo 18:13.
Kana mwana wenyu achishungurudzwa nevamwe, mubatsirei kuti azive kuti zvaanoita kana kuti zvaanotaura zvinogona kuita kuti zvinhu zviite nani kana kuti zviwedzera kumuomera. Bhaibheri rinoti: “Mhinduro, kana iri nyoro, inodzora kutsamwa, asi shoko rinorwadza rinomutsa hasha.” (Zvirevo 15:1) Kuda kudzorera kunogona kuita kuti atowedzera kuitirwa utsinye.
Zvinotaurwa neBhaibheri: ‘Musatsiva zvinokuvadza nezvinokuvadza kana kutuka nekutuka.—1 Petro 3:9.
Tsanangurirai mwana wenyu kuti kana akasadzorera hazvirevi kuti akapusa. Asi zvinotoratidza kuti ari kuziva zvaari kuita nekuti anenge achiramba kuita zvinodiwa nemumwe munhu. Anenge agona nekuti kana akadzorera zvinenge zvava kureva kuti naiyewo ava kutoshungurudza vamwe.
Zvakakosha kuti mwana wenyu azive izvi kana paine vanhu vanomutumira zvinhu zvekuda kungomurwadzisa pafoni kana paIndaneti. Kana akada zvekudzorerawo, zvichaita kuti munhu ari kumushungurudza atowedzera, uye mwana wenyu anogona kupedzisira ava kutonzi ane mhosva yekushungurudzawo vamwe! Saka dzimwe nguva kungonyarara ndiko kuzvigona. Kuita izvi kunoita kuti munhu ari kushungurudza mwana wenyu apererwe nezvekutaura.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Kana pasina huni, moto unodzima.”—Zvirevo 26:20.
Zvimwe zvinogona kubatsira mwana wenyu, kusiyana nevanhu vanogona kumushungurudza kana kuti kurega kuenda kunzvimbo dzavanenge vari. Semuenzaniso kana akaziva kunenge kuine munhu anogona kumushungurudza anogona kuchinja nzira oenda nekumwe kuti asazvipinza pakaoma.
Munogona kutaura nemudzidzisi wemwana wenyu kana kuti nevabereki vemwana ari kushungurudza mwana wenyu
EDZAI IZVI: Mwana wenyu asati asarudza zvekuita, ngaazive zvazvakanakira uye zvazvakaipira. Semuenzaniso:
Chii chingaitika kana akangoratidza kuti haana basa nemunhu ari kumudenha?
Chii chingaitika kana akava neushingi hwekuudza munhu wacho kuti asiyane naye?
Ko kana akanoudza vakuru vechikoro?
Kuitira munhu wacho zvakanaka kana kuti kungoitawo zvinhu zvinosetsa kungabatsira here?
Nyaya dzekushungurudzwa dzinosiyana-siyana pasinei nekuti vari kuonana here kana kuti ndezvepaIndaneti. Saka batsirai mwana wenyu kuti awane nzira yekugadzirisa dambudziko racho. Muudzei kuti mucharamba muchimubatsira.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Shamwari yechokwadi ine rudo nguva dzose, uye ihama inoberekerwa kubatsira pakunenge kuine kutambudzika.”—Zvirevo 17:17.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndodii Kana Mwana Wangu Achishungurudzwa Nevamwe?
ijwhf nyaya 5